MAUNG | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts by MAUNG	8
တစ်ခါက တစ်ဘဝ (၄)
လေယာဉ် ပေါ်မှ အလွဲများ
တစ်ခါ က တစ်ဘဝ (၂)
တစ်ခါ က တစ်ဘဝ (၁)
Comments By PostPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - awra-cho - kyeemiteကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - chit - TNAနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကြည်ဆောင်း - Ei Kyipyarအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - kyeemiteမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - GaviaGirl - padonmarသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - ခင် ခဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - awra-cho - Kaung Kin Pyarရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Yin Nyine Nway - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - Admin Kai - Myo ThantCongress - Admin Kai - Ei Kyipyarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - သူကလေး - သူကလေးစက္ကန့်သုံးရာ ဘာဝနာ - kyeemite - ဆူးစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - kyeemite - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - သူကလေး - ခင် ခကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ခင် ခ - kyeemiteငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - သူကလေး - အလင်း ဆက်ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - kyeemite - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)ပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - ခင် ခ - TNAဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - TNAအတ္တဆန် - kyeemite - ခရီးသည်ကြီးအဟံ ပထမံ - TNA - ဆူးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦးကြောင်ကြီး - Miss Crystalline``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ဦးကြောင်ကြီး - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - ဆူး - ဆူးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဆူးယုံလား? - ဦးကြောင်ကြီး - ဦးဦးပါလေရာအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - kyeemite - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities